एजेन्सी जेठ ११ – लग्जरी ह्यान्डसेट बनाउने बेलायती कम्पनी भर्चुले एक पटक पुनः महँगो मोबाइल फोन लञ्च गरेर सबैलाई अचम्मित बनाएको छ । यसको मूल्य सुन्दा तपाईं चकित हुनुहुनेछ । भर्चु सिग्नेचर कोब्राको मूल्य लगभग ३ लाख ६० हजार डलर अर्थात् ३ करोड ७३ लाख नेपाली रुपैयाँ हो । यो एक स्मार्टफोन नभई फिचर फोन […]
एजेन्सी जेठ ८ – पोर्न एक यस्तो शब्द हो जसबारे हरेक कोहीलाई जानकारी छ र यो गुगलमा..
एजेन्सी जेठ ८ – रिसर्च फर्म स्ट्र्याटेजी एनालिटिक्स स्मार्टफोन मोडल ट्र्याकर (एस..
इन्टाग्राम युवाहरुको मानसिक स्वास्थ्यका लागि घातक
एजेन्सी लण्डन, जेठ ५ – बेलायतमा गरिएको एक सर्भेले समाजिक सञ्जाल इस्टाग्राम युवाह..
भारतीय किशोरले बनाए विश्वकै हलुङ्गो भूउपग्रह, अन्तरिक्षमा पठाइने
एजेन्सी लण्डन, जेठ ३ – भारतीय किशोरले बनाएको विश्वकै हलुङ्गो भूउपग्रहलाई आगामी ज..
साइबर हमला पछाडि उत्तर कोरिया त होइन ?
डेव ली /बीबीसी उत्तर अमेरिका टेक्नोलोजी संवाददाता जेठ ३ – ग्लोबल साइबर हमलाको पछाडि को छ ? जुन ताजा तथ्य पाइएको छ, त्यसबाट लाग्छ कि हमलाको पछाडि उत्तर कोरियाको हात हुनसक्छ । तर उपलब्ध जानकारी अनुसार अन्तिम नतिजामा पुग्न सकिन्न । तपाईंले सायदै लेजरस ग्रुपको नाम सुन्नुभएको होला तर तपाईं यसको क्रियाकलापबारे पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ [..
भारी साइबर खतराः कसरी बचाउने कम्प्युटर र डाटा
बीबीसी जेठ १ – संसारभरी भएका साइबर हमलापछि विशेषज्ञले यो हप्ता र्यानसमवेयरका अन्य मामला सार्वजनिक हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । थुप्रै संगठन, संस्था, कम्पनी र सर्वसाधारणले कसरी यी हमलाबाट आफ्नो कम्प्युटरलाई बचाउने भन्ने बारे जिज्ञासा व्यक्त गरेका छन् । यो हमलाले जति मात्रामा क्षती पुर्याएको छ, त्यस विषयमा पनि चर्चा भइरहेको छ । र्..
क्रिस फक्स/ बीबीसी जेठ १ – शुक्रबार संसारभीका ९९ देशमा साइबर हमलाले सनसनी मच्चियो । उक्त हमलाका कारण थुप्रै संस्थाका कामकाज पूर्ण रुपमा ठप्प भयो । यसै बिच बेलायतका एक सेक्युरिटी रिसर्चरले बीबीसीसँगको कुराकानीमा आफू संयोगले ‘मलिसस र्यानसमवेयर’ लाई फैलिनबाट रोक्न सफल भएको जानकारी दिए । मलिसस र्यानसमवेयर एक प्रकारको साइबर हमला हो ज..
काठमाडौं, ३० वैशाख – नेपालको चर्चित मोबाइल एप हाम्रो पात्रोले स्थानीय निर्वाचन विशेष अपडेट लिएर आएको छ । स्थानीय निर्वाचनको ताजा अपडेट सर्वसाधारणले सजिलै मोबाइलमै पाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ ‘हाम्रो पात्रो’ले नयाँ अपडेट ल्याएको बताएको छ । अफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाचनमा सहभागी सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टिको नाम, सहभागी उम्मेद्वारबारे विस..
काठमाडौँ, वैशाख ३० – संसारको प्रख्यात वेबसाइट बनाउने र सित्तैमा पाइने सफ्टवेर ‘वर्डप्रेस सम्वन्धि एक दिने सेमिनार कार्यक्रम “वर्ड क्याम्प काठमाडौँ २०१७” को आयोजना आगामी जेष्ठ ६ गते शनिबारका दिन काठमाडौँमा हुने भएको छ । वर्डक्याम्प विश्वव्यापी रुपमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम हो । नेपालमा भने सन् २०१२ देखि नेपालका वर्ड..
यो हो विश्वको सबैभन्दा महंगो सिरानी, मूल्य ५९ लाख
नेदरल्याण्डमा आविश्कारक बनेका एक फिजियोथेरापिस्टले १५ वर्ष लगाएर सिरानी तयार गरेका छन् । यो सिरानीले सुत्नेसम्बन्धि सबै समस्या हल गर्ने उनको दाबी छ । तर, यसलाई किन्न भने ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । आफूलाई घाँटीको विशेषज्ञ बताउने थिज्स भान डर हिल्सटले मल्बरी सिल्क, इजिप्टको रुवा र २४ क्यारेट सुनको कपडा प्रयोग गरेर विश्वकै म..
एजेन्सी बैशाख २० – हेडलाइन पढेर अचम्मित हुनुभयो होला तर यो हामीले होइन एक अध्ययनले बताएको छ । केही समयअघिको एक रिपोर्टले दिएको जानकारी आुसार परीक्षाभन्दा ठिक अघि विद्यार्थीले फेसबुक चेक गरे त्यसको नतिजा राम्रो हुनेछ । यो अध्ययन अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ इलिनोइसमा गरिएको छ । अध्ययनको नतिजालाई मान्ने हो भने फेसबुक तथा अन्य सोसल [&h..
एजेन्सी बैशाख २० – माइक्रोसफ्टले मे २ तारिखमा आफ्नो नयाँ अपरेटिङ सिस्टम (ओएस) विन्डोज १० एस लञ्च गरेको छ । यो ओएस शिक्षाका लागि केन्द्रित छ । यो नयाँ अपरेटिङमा पहिला देखि नै इन्स्टल गरिएका एप्लिकेशन वा विन्डोज स्टोरबाट डाउनलोड गरिएको एप्लिकेशनले मात्र काम गर्नेछ । यो माइक्रोसफ्टको तर्फबाट गुगल क्रोम ओइसको जवाफको रुपमा लञ्च [&hel..
नोकिया एट यस वर्षको सबैभन्दा शानदार स्मार्टफोन, यस्तो छ कारण
एजेन्सी बैशाख १७ – नोकिया यो वर्ष थुप्रै स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्दैछ जसमध्ये कुनै बजारमा आइसकेका छन् । कम्पनीले सबैभन्दा पहिले आफ्नो एन्ड्रोइड स्मार्टफोनलाई चीनमा पेश गरेको थियो । त्यसपछि अब नोकियाको ३३१० फिचर फोन लञ्च भएपछि चर्चामा रह्यो । एचएमडी ग्लोबलसँग नोकिया थुप्रै स्मार्टफोनमा काम गरिरहेको छ । जसमध्ये थुप्रै फोन चाँडै नै ..
प्रविधिको युगमा पेनड्राइभको महत्व सबैलाई थाहै छ । सानो सामान भए पनि पेनड्राइभको काम ठूलो छ । आफ्ना महत्वपूर्ण डाटा सुरक्षित स्टोर गर्न सकिने पेनड्राइभलाई सुरक्षित बनाउनु पहिलो कर्तव्य हो । पेनड्राइभमा पासवर्ड राखिदिएर लक गर्न सकिन्छ । कुनै एडिसनल सफ्टवेयरविना पनि लक गर्न सकिन्छ । तर, यो काम विन्डोज सेभेन अल्टिमेट ओएस र यसको [&he..
काठमाडौ, बैशाख १५ – स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालय एवं अनुशन्धान केन्द्रबीच संयूक्त अनुसन्धान एवं सहकार्य गर्ने उद्धेश्यले‘प्राकृतिक उत्पादन ः पहिचान, प्रमाणिकरण तथा प्रयोग’बारे दुइदिने राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी सुरु भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, व्यवहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) को आयोजनामा..
काठमाडौँ, ६ वैशाख । मौसमले साथ दिएको खण्डमा वैशाख महिनामा नेपाली आकाशमा दुईवटा उल्का वर्षाको रमाइलो दृश्य देख्न पाइनेछ । वैशाखमा हेर्न नसकिए यस्तो दृश्य हेर्नलाई कार्तिक महिनासम्म कुर्नुपर्ने छ । नेपाल इस्ट्रोनोमिकल सोसाईटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईका अनुसार वैशाख ५ गतेदेखि सक्रिय भएको वीणा उल्का वर्षा (लाइरिड मिटियोर सावर) वैशाख ..
जोनाथन आमोस/बिबिसी चैत ३ – बरफले जमेको शनी ग्रहको उपग्रह इन्सेलाडस पृथ्वीपछि जीवनको सम्भावना रहेको अर्को ठाउँ हुनसक्ने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । कासिनी यानले ५०० सय किलोमिटर चौढाई रहेको उपग्रहमाथि गरेको अनुगमन र अनुसन्धानपछि वैज्ञानिहरु यो निश्कर्षमा पुगेका हुन् । सो यान उपग्रहको माथि उडेको थियो भने त्यहाँको समुद्रबाट अन्तरिक्..
एजेन्सी बैशाख २ – फेसबुकले आफ्नो वेबसाइटमा केही प्राविधिक परिवर्तन गरेको छ जसमार्फत अब स्प्याम अकाउन्टको पहिचान गरेर त्यसलाई ब्लक गर्न निकै सजिलो हुनेछ । फेसबुकले अब यस्तो अकाउन्टको पनि पहिचान गरेर ब्लक गर्न सक्षम हुनेछ जुन हर्दा पनि अनधिकृत देखिन्छ । यसका लागि फेसबुकले नक्कली अकाउन्टको ढाँचा र क्रियाकलापमाथि निगरानी गरिरहेको छ ..
बीबीसी बैशाख २ – मोबाइल फोन घुमाउने तरिकामार्फत ह्याकरले पिन नम्बर र पासवर्डको छनक पाउन सक्छन् । न्यूक्यासल युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकको ताजा अनुसन्धानले सो कुरा बताएको छ । साइबर मामलाका जानकार अनुसार स्मार्टफोनसँग गर्ने व्यवहारले किबोर्ड कस्तो प्रकारले प्रयोग गरिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी हुन्छ । उनीहरुको दाबी अनुसार यो तरिकाले चार..